မေးနေကျ မေးခွန်းများ – Unicode Today
Android Phone တွေမှာ ယူနီကုဒ်ဖောင့်သုံးချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
မိမိသုံးတဲ့ စက်ပစ္စည်းထဲမှာ ယူနီကုဒ်ဖောင့်ရှိရပါမယ်။ စာရိုက်ဖို့ Keyboard လက်ကွက်ရှိရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် ယူနီကုဒ်ဖောင့်စနစ်သုံးလို့ရပါပြီ။ အခုချိန်ခါမှာ မည်သည့်ပစ္စည်းပဲဝယ်ဝယ် ယူနီကုဒ်ဖောင့်စနစ်ပါလာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် ပြန်ထည့်သွင်းရပါမယ်။ ဖောင့်စနစ်ပြန်ထည့်သွင်းတဲ့ နည်းလမ်းကတော့ ဖုန်းအမျိုးအစား တခုနှင့်တခု ကွာခြားမှုရှိပါတယ်။
အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းသုံး ၃ ခုကတော့
၁။ Language & Input ကနေပြောင်း လို့ရတာရှိတယ်
– (Sumsang, Huawei စသည့်)
– (English ကိုအပေါ်ကထား၊ ယူနီကုဒ်ကို ဒုတိယထား)
၂။ Display သို့မဟုတ် Theme Style မှာ Default font ပြန်ထားပေး ရတာရှိတယ်
– Setting >> Display >> Font Style (သို့) System Font >> Default Font ကိုရွေး
– မိမိကြိုက်တဲ့ဖောင့်ကို iFont app သုံးပြီးထည့်လို့ရတယ်။
၃။ ဖုန်း System ကို Update လုပ်လိုက်ရင် ယူနီကုဒ် ပြန်ရနိုင်ပါတယ်။
iPhone, iPad ယူနီကုဒ်သုံးချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ?
iOS စနစ်မှာ မြန်မာဖောင့်ပါလာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်၊ စာရိုက်ဖို Keyboard လက်ကွက်တခုပဲလိုပါတယ်။ ttKeyboard ကို iTune ကနေရယူနိုင်ပါတယ်။ ဇော်ဂျီဖောင့် profile ဖျက်ရပါတယ်။ မိမိနှစ်သက်ရာဖောင့်ကို myFont App ကနေ ပြန်လည်သွင်းယူနိုင်ပါတယ်။